Fiangonana kôngregasiônalista - Wikipedia
Ny Fiangonana kôngregasiônalista dia fiangonana prôtestanta manaraka ny fomban' ny Fiangonana nohavaozina izay mampihatra ny fomba fandaminam-piangonana atao hoe kôngregasiônalisma ka ny paroasy tsirairay dia mizaka tena. Araka ny tatitra nataon' ny Pew Research Center dia 0,5 %n' ny Prôtestanta no mpivavaka kôngregasiônalista maneran-tany, izany hoe miisa 4 000 000 eo ho eo. Ao Etazonia sy ao amin' ny Fanjakana Mikambana no tena ahitana azy indrindra. Ny Fiangonana kôngregasiônalista dia hita koa any Irlandy, Kanada, Afrika Atsimo, Zelady Vaovao sy any amin' ny firenena nosy any amin' ny faritra pasifika toa an' i Samoà. Hita any Arzantina sy Bolgaria koa io fiangonana io. Ny mpifindra monina prôtestanta na ny mpamita iraka toy ny London Missionary Society no nampiditra azy io tao amin' ireo tany ireo.
Roa ny fototra anankinan' ny Fiangonana kôngregasiônalista ny finoany dia ny Soratra Masina irery ihany (latina: Sola scriptura) sy ny maha mpisorona ny mpino rehetra. Ny maha mpisorona ny mpino rehetra dia midika fa ny mpino tsirairay dia mpisorona (na pretra) ary samy mahazo fahendrena sy torolalana ary hery ny zanak' Andriamanitra rehetra. Vokatr' izany dia mahaleo tena amin' ny fanapahan-keviny momba ny fandaminana tiany hatao ao am-piangonany ny mpivavaka ao amin' ny fiangonana isan-toerana ka tsy itsabahan' ny fiangonana any amin' ny toerana hafa na dia samy fiangonana kôngregasiônalista aza. Vokatr' izany koa dia mety misy fahasamihafany ny teôlôjian' ny fiangonana isan-toerana.
Ny Fiangonana kôngregasionalista dia teraka nandritra ny Reformasiona anglisy ka isan' ireo mpandala ny fahadiovan' ny fiangonana (Poritàna) izy ireo sady nihevitra fa ampahany fotsiny ny fanavaozana (na reformasiona) natao tamin' ny Fiangonana ka tsy mahafa-po. Isan' ny nanohitra ny fahefan' ny mpanjakan' i Angletera, dia Elizabeta I, koa izy ireo raha nikatsaka ny firaisan' ny firenena sy ny fandriam-pahalemana ary ny hisian' ny Fiangonan' i Angletera miray ny mpanjaka. Notoherin' izy ireo izany satria heveriny fa mbola ahitana taratra ny fomba nolovana tamin' ny Fiangonana katôlika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_kôngregasiônalista&oldid=1012865"
Voaova farany tamin'ny 20 Jolay 2021 amin'ny 09:19 ity pejy ity.